डा. जगदीश जोशी सेती प्रादेशिक अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता हुन् । १४ वर्षदेखि चिकित्सा पेसामा आबद्ध जोशी दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् । यतिबेला अस्पतालमा रहेका चारजना कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका जोशीसँग साप्ताहिकका लागि महेश तिमल्सिनाले गरेको टेलिफोन कुराकानी :
यतिबेला सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
यस अस्पतालमा अहिलेसम्म चार जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरूको अवस्था सामान्य छ । कोभिड–१९ लाई लक्षित गरेरहामीले २४ सै घन्टा स्क्रिनिङ ट्रायज, फिभर क्लिनिक र आइसोलेसन कक्षमा ड्युटी मिलाएर स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, एसिस्टेन्ट कर्मचारी, हेल्पर स्टाफहरूलाई राखिरहेका छौं । चिकित्सकहरू ए, बी र सी समूह बनाएर उपचारमा खटिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म ३० जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिसकेका छौं । उहाँहरूको नेगेटिभ रिपोर्ट आएर डिस्चार्ज गरेका छौं । हाल आइसोलेसनमा पाँच जना हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म यस अस्पतालबाट ६१ जना थ्रोड स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकोमा ११ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने ४ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएर उपचाररत हुनुहुन्छ । बाँकी सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएर घर फर्किसक्नुभएको अवस्था छ ।
कोभिड–१९ संक्रमित चार जनाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ ?
उहाँहरूको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । चार जनामध्ये दुबईबाट फर्कनुभएको एकजना सुरुमा खोकी र ज्वरोको लक्षण लिएर आउनुभएको थियो । उहाँ चैत ११ मा अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो, १४ गते उहाँको पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट आएपछि उहाँलाई आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गर्‍यौं । उहाँलाई बीचमा पखालाको समस्या देखियो, अहिले त्यो निको भइसकेको छ । अहिले उहाँको अवस्था सामान्य छ । बाँकी तीनजना लक्षण लिएर अस्पताल आउनुभएको होइन । दुई जनाको क्वारेन्टाइन स्थलमा परीक्षणको क्रममा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको हो । अर्को एकजना महिला दुबईबाट आउनुभएको पहिलो व्यक्तिकै परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीनै जनाको अवस्था सामान्य छ ।
केही समयअघि दुबईबाट फर्किएका कोरोना संक्रमितले आफूलाई अस्पतालबाट उचित व्यवहार नभएको गुनासो गरेका थिए नि ?
यो सबै मिडियाले फैलाएका अफवाह हुन् । कोभिड–१९ का सुरुवाती दिनमा नेपाल सरकार नै पूर्वतयारीमा थिएन । हामी सेती प्रादेशिक अस्पताल मात्रै तयारीमा हुने कुरा नै भएन । हामी पुरानो संरचनामा नै काम गरिरहेका थियौं । बिरामीको चाप दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । बिरामीको चापको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या एकदमै कम छ । त्यही भएर दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि बिरामीको चापमा केही कमी आयो तर हामीसँग त पुरानै संरचना छ । हामीले कोभिड–१९ लाई लक्षित गरेर तत्कालै नयाँ संरचना बनाउन सकेका छैनौं । त्यसो भएको हुनाले हामीले कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामीलाई भर्ना गरेर राखेका थियौं । त्यसमध्ये एकजनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि ती व्यक्तिलाई अन्य शंकास्पद व्यक्तिबाट टाढा राख्नुपर्‍यो । त्यसको व्यवस्थापन तुरुन्तै हुने सम्भावना थिएन । उहाँलाई छुट्टै एउटा कोठामा राखियो, छुट्टै कोठामा राख्दा उहाँमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको हुनसक्छ । तर, हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्दागर्दै केही मिडियाकर्मीहरूले उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभए छ । उहाँ तत्काल आबेगमा आएर केही भन्नुभयो होला । हामीले उहाँहरूलाई इन्टरनेट, तातोपानी, खाना, खाजाको सक्दो राम्रो व्यवस्था गरेका छौं । सुरुवाती अवस्थामा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ आए होला तर त्यो ठूलो मुद्दा होइन ।
तपाईहरू आफैंले कत्तिको चुनौतीको महसुस गरिरहनुभएको छ ?
सुरुवातमा निकै चुनौती थियो । हामीसँग सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि थिएनन् । पूर्वतयारी पनि थिएन । यो हाम्रा लागि नौलो अनुभव थियो । हामीसँग पुरानो संरचना थियो । त्यसमा पनि सामान्य बिरामीहरू आइरहेका थिए । आजको दिनसम्म पनि हामी दोब्बर काम गरिरहेका छौं । एउटा ती सामान्य बिरामीलाई पनि हेर्नुपरेको छ भने अर्को कोभिड–१९ का बिरामीलाई पनि हेर्नुपरेको छ । तर, जनशक्ति कम छ । अहिलेको अवस्थामा एउटै अस्पतालमा कोभिडका बिरामी र पुराना बिरामीलाई मिसाएर राख्नु भनेको हाम्रो जस्तो देशका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।
अहिले कोभिड–१९ को औषधि पनि पत्ता लागेको छैन र उपचार सामग्री पनि पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा कुन पद्धतिबाट संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ?
कुनै पनि भाइरल रोगहरूको इन्फ्लुएन्स ट्रिटमेन्ट कमैको मात्र हुन्छ । नोबेल कोरोना भाइरस भनेको विश्वकै लागि नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस हो । यसमा निकै अनुसन्धान र औषधिको अनुसन्धान साथै परीक्षण भइरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बिरामीको लक्षणअनुसार नै उपचार गर्ने हो । बिरामीलाई जस्तो समस्या हुन्छ त्यसैअनुसार उपचार गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीकहाँ गम्भीर अवस्थामा बिरामी छैनन् । त्यसैले उहाँहरूको लक्षणको आधारमा उपचार गरिरहेका छौं ।
सुदूरपश्चिम कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालले कति कोरोना संक्रमितलाई उपचार दिन सक्छ ?
हामीसँग अहिले २४ वटा आइसोलेसन बेड छ । सुरुमा २ वटाबाट सुरु गरेर १०वटा हुँदै २४ वटा आइसोलेसन बेडसम्म बिस्तार गरेका छौं । यहाँभन्दा बढाउन सक्दैनौं होला ।
कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा सरेको देखिएको छ, सुदूरपश्चिममा थप जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामी कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो चरणमा गएका छौं । हाम्रै अस्पतालमा भएका चार जना कोभिड–१९ संक्रमितमध्ये २ जना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइन स्थलमा बसेको व्यक्तिमा देखियो । अर्कोचाहिँ विदेशबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा सारेको देखियो । यसले पहिलो त लोकल ट्रान्समिसन पनि हुन थाल्यो भन्ने देखायो, दोस्रो भारतबाट आएका व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा यो रोग ल्याइरहेका छन् भन्ने कुरा देखियो । सुदूरपश्चिममा करिब डेढ लाख मानिस भारतबाट आएका छन् । ती व्यक्तिहरू कहाँ छन्, कति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्/छैनन् भन्ने कुराको निगरानी गरिएको छैन । त्यसो भएको हुनाले सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी छ । त्यसैले अहिले नै सतर्कता अपनाएनौं भने भोलि ठूलो महामारीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो छ ?
पहिलाको तुलनामा पीपीईहरू पाइरहेका छौं, तैपनि अपुग नै छन् । अझै उपलब्ध भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले टिम बनाएर काम गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामी कोरोना संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आउने भएकाले हामी पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । घर जानलाई डर नै हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा खाना, बस्नको व्यवस्था गर्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो । साथै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने खालको गतिविधि ल्याइदिनुपर्‍यो । केही समयअघि लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो । त्यसो गर्नेभन्दा पनि अहिलेको अवस्था भनेको मनोबल बढाएर अघि बढ्ने समय हो । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउन सक्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा रहँदा तपाईंले संगालेको अनुभव कस्तो छ ?
म सुरुवातदेखि नै यसमा लागिरहेको छु । म स्थानीयवासी हुँ तैपनि घर नगएको दुई साता भइसक्यो । आफ्नो र परिवारको सुरक्षाका लागि घरबाहिरै बसिररहेको छु । अब अस्पतालको व्यवस्थापनको अनुभवको कुरा गर्दा सुरुवाती अवस्थामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ थियो । किनभने हामी नै पूर्वतयारीमा थिएनौं र हामीसँग पिपिइको पनि अभाव थियो । कर्मचारीहरू पनि मोटिभेट थिएनन् । जसले गर्दा उहाँहरूलाई बोलाउन, काममा खटाउन पनि समस्या थियो । पहिलेको तुलनामा केही सहज हुँदै गएको छ तर व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् । यो टिम वर्क हो एउटा व्यक्तिले मात्र गरेर हुने होइन । यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कमी भएको जस्तो लागिरहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूमा एक मकिसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास छ । मैले केही दिनअघि एउटा प्रहरीको समूहलाई कोभिङ–१९ ओरेन्टेसन दिएको थिएँ । पहिलो त, यो रोग कस्तो हो भनेर बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा यो एक किसिमको युद्ध हो । यो युद्धको आर्मी भनेको त स्वास्थ्यकर्मी नै हो । त्यसो भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता के छन् र उनीहरूलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान जानुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष भनेर बस्नुहुन्न ।
यतिबेला कोभिड–१९ को संक्रमण दोस्रो चरण भनिएको छ । कस्तो अवस्थालाई तेस्रो चरण मानिन्छ ?
बाहिरबाट कुनै कोरोना भाइरसको पोजेटिभ केस आउनु र त्यो केसले समुदायस्तरमा सार्नु भनेको दोस्रो चरण हो । अब तेस्रो चरण भनेको यो समुदायमा गएर एक समुदायबाट अर्को समुदायमा सर्न थाल्नु हो । यो अवस्थामा कसलाई कोरोनाको संक्रमण छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन । त्यसपछि चौथो चरणमा प्रवेश गर्छ अनि महामारीको रुप लिन्छ । संक्रमितको मृत्यु हुन थाल्छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ । जुन अहिले इटली, स्पेनमा देखिएको छ ।
कोभिड–१९ को उपचार गर्दा कतिपय देशले अन्य देशको उपचार शैली अपनाइरहेको छ, नेपालले चाहिँ कुन देशको उपचार शैली अपनाएको छ ?
अहिले त हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले दिएको उपचार पद्धतिलाई फलो गरिररहेका छौं । अब हामीले अमेरिका, युरोपको जस्तो उपचार पद्धति लागू गर्न सक्दैनौं । हामीले छिमेकी देश भारतले अपनाएको उपचार पद्धतिसँग नजिक भएर गर्न सक्छौं । समग्रमा हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर उपचार गरिरहेका छौं । साथै सुदूपश्चिममा भारतबाट आउनेहरूको संख्या अलि बढी भएकाले अन्य ठाउँको तुलनामा अलि बढी जोखिमपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । तैपनि सरकारले चालेको यो लकडाउनको नियमलाई सबैले पालना गर्ने हो र तत्काल बढीभन्दा बढी मासिनहरूमा कोरोनाको परीक्षण सुरु गर्ने हो भने छिट्टै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।